A kọrọ ọnwụ, mmerụ ahụ, mmebi ka nnukwu ala ọma jijiji kpara Haiti
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Haiti » A kọrọ ọnwụ, mmerụ ahụ, mmebi ka nnukwu ala ọma jijiji kpara Haiti
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Haiti • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ụlọ Ọrụ Ịdọ Aka ná Ntị Tsunami nke US wepụtara iyi egwu mbufịt, mana ebuliri iyi egwu ahụ n'ime otu awa.
Ala ọma jijiji mebiri Haiti.
Akụkọ a na -enwetaghị nkwenye na -egosi ọtụtụ ọnwụ na ọtụtụ mmerụ ahụ.
Ịdọ aka na ntị Tsunami nyere, mana kagburu obere oge.
Nnukwu ala ọma jijiji, nke dị ike karịa ala ọma jijiji ahụ na -emebi emebi na 2010, mere na Haiti n'isi ụtụtụ Satọde, na -emebi nnukwu mbibi na mpaghara ndịda mba Caribbean.
US Geological Survey tinyere ike nke ịma jijiji ahụ na 7.2, ma ọ bụ “isi.” Ebe ala ọma jijiji ahụ mere bụ 12km (7.5 kilomita) n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Saint-Louis-du-Sud, obodo nke ihe karịrị mmadụ 50,000 bi na ya.
Akụkọ a na -enwetaghị nkwenye na -egosi ọtụtụ ọnwụ na ọtụtụ mmerụ ahụ. USGS kwuru na "ọnwu nwere ike bụrụ oke na ọdachi nwere ike gbasaa" Haiti.
A kọrọ nnukwu mbibi na Haiti, ihe onyonyo si n'obodo Jeremie dị nso na-egosi ụlọ ndị dara ada na okporo ụzọ ndị mkpọmkpọ ebe.
Vidio Jeremie gosiri ka uzuzu uzuzu na -ejupụta n'okporo ụzọ, ebe ụlọ tọgbọrọ n'efu.
Ụfọdụ ndị na -ebipụta na soshal midia kọrọ na ọ na -enwe mmetụta ala ọma jijiji ahụ dịka Jamaica, na Ụlọ Ọrụ Ịdọ aka na ntị nke mbufịt US wepụtara iyi egwu mbufịt obere oge ka nke ahụ gasịrị. Otú ọ dị, e wepụrụ iyi egwu ahụ n'ime otu awa.
Ala ọma jijiji ahụ mere nkeji ole na ole ala ọma jijiji 6.9 rutere Alaska Peninsula. Otú ọ dị, ala ọma jijiji Alaska rutere na mpaghara ebe mmadụ na -ebikarịghị nke ọma, ebe enwere ike imebi ihe pere mpe.